Manzano (UD), i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Novasol
U-Novasol unokuphawula okungu-239 kwezinye izindawo.
Ifulethi leholide emagqumeni asempumalanga yesifunda iFriuli Venezia Giulia, eduze kwase-Udine.
Indawo yokuhlala ingaphakathi kwendawo yokudayisa ekhiqiza iwayini elimnandi. Izivakashi ziyakwazi ukufinyelela echibini lokubhukuda elihle eliqhele ngamakhilomitha ambalwa nasezindaweni zomphakathi ezinhle, lapho ungase futhi uhlele izoso elihle.
Uzoba nenjabulo yokunambitha iwayini elikhiqiziwe elinikezwa umnikazi wendlu. Ungakwazi futhi ukuvakasha okuthakazelisayo endaweni yokukhiqiza iwayini, ukuze ubone futhi uqonde izigaba zokukhiqiza nokongiwa.
Izindlela eziningi zamabhayisikili ziqala ukusuka eManzano, okuyenza ibe ilungele uhambo oluya ezindaweni ezizungezile. Isikhundla sale ndawo yewayini sinesu elihle kakhulu lokuthola umgwaqo odumile "weWine Road", osuka eCormons unqamula izintaba namahektha ezivini ezihlonishwayo lapho kukhiqizwa khona iwayini elaziwayo emhlabeni wonke.
Ukusuka edolobheni laseManzano ungakwazi futhi ukufinyelela kalula ngemoto izindawo eziningi zokuvakasha ongaphuthelwa uFriuli Venezia Giulia: Udine (16 km) neNqaba edumile egqumeni; I-Cividale del Friuli (15 km) neDuomo yayo edumile kanye ne-evocative Ponte del Diavolo emfuleni iNatisone; Palmanova (16 km) ifakwe ku-UNESCO World Heritage sites. IManzano itholakala nje ngamakhilomitha angama-23 ukusuka edolobheni laseGorizia nenqaba yayo yasendulo ebheke idolobha kanye nesigodi esiwela umfula i-Isonzo.
Enye indawo eseduze nethakazelisayo idolobha lase-Aquileia (35 km), ichweba elidumile loMbuso WaseRoma elinokuvubukula okuthakazelisayo okuthakazelisayo. Ungenza nohambo lokuya ezindaweni zokungcebeleka ezisogwini lolwandle namabhishi azo amahle anesihlabathi njenge-Grado (45 km) ne-Lignano Sabbiadoro (50 km). Idolobha elihle laseTrieste elibheke eGulf of Trieste lingamakhilomitha angama-62 ukusuka lapha. Ungaphuthelwa ukuvakashela i-Miramare Castle emangalisayo ebheke eGulf of Trieste.
Bheka futhi IFC157, -158 kanye -159. Izithombe ziyizibonelo zezithombe kuphela.
Ifulethi leholide emagqumeni asempumalanga yesifunda iFriuli Venezia Giulia, eduze kwase-Udine. Indawo yokuhlala ingaphakathi kwendawo yokudayisa ekhiqiza iwayini elimnandi. Izivakashi ziyakwazi ukufinyelela echibini lokubhukuda elihle eliqhele ngamakhilomitha ambalwa nasezindaweni zomphakathi ezinhle, lapho ungase futhi uhlele izoso elihle. Uzoba nenjabulo yokunambitha iwayini elikhiqiziwe elinikezwa umnikazi wendlu. Ungakwazi futhi ukuvakasha okuthakazelisayo endaweni yokukhiqiza iwayini, ukuze ubone futhi uqonde izigaba zokukhiqiza nokongiwa. Izindlela eziningi zamabhayisikili ziqala ukusuka eManzano, okuyenza ibe ilungele uhambo oluya ezindaweni ezizungezile. Isikhundla sale ndawo yewayini sinesu elihle kakhulu lokuthola umgwaqo odumile "weWine Road", osuka eCormons unqamula izintaba namahektha ezivini ezihlonishwayo lapho kukhiqizwa khona iwayini elaziwayo emhlabeni wonke. Ukusuka edolobheni laseManzano ungakwazi futhi ukufinyelela kalula ngemoto izindawo eziningi zokuvakasha ongaphuthelwa uFriuli Venezia Giulia: Udine (16 km) neNqaba edumile egqumeni; I-Cividale del Friuli (15 km) neDuomo yayo edumile kanye ne-evocative Ponte del Diavolo emfuleni iNatisone; Palmanova (16 km) ifakwe ku-UNESCO World Heritage sites. IManzano itholakala nje ngamakhilomitha angama-23 ukusuka edolobheni laseGorizia nenqaba yayo yasendulo ebheke idolobha kanye nesigodi esiwela umfula i-Isonzo. Enye indawo eseduze nethakazelisayo idolobha lase-Aquileia (35 km), ichweba elidumile loMbuso WaseRoma elinokuvubukula okuthakazelisayo okuthakazelisayo. Ungenza nohambo lokuya ezindaweni zokungcebeleka ezisogwini lolwandle namabhishi azo amahle anesihlabathi njenge-Grado (45 km) ne-Lignano Sabbiadoro (50 km). Idolobha elihle laseTrieste elibheke eGulf of Trieste lingamakhilomitha angama-62 ukusuka lapha. Ungaphuthelwa ukuvakashela i-Miramare Castle emangalisayo ebheke eGulf of Trieste. Bona IFC157 -IFC158 - IFC159.Izithombe ziyizibonelo zezithombe.
Amabanga: indawo yokuhlala eseduze 5 m / ukuyothenga 800 m / indawo yokudlela 300 m / idolobha eliseduze (Udine) 15 km